ihlelwe kahle ukudla kwamaphuphu nje uzalwa libaluleke kakhulu. It enquma ukuthi bazozizwa evamile noma uqale ukulimaza. Futhi-ke, ngokushesha kangakanani zikhula futhi uqale ebeka amaqanda.
Vele kwamazinyane bazalelwa isikhathi esithile ungadli (amahora 8-10), ngakho udinga ukuba abanike indawo yokuhlala ngaphambi kokuthi ukuhlela amaphuphu ziklabile. Ngo ezinsukwini zokuqala ukuphila kwezilwane ezincane zisengozini, bedinga ukufudumala nokukhanya. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sithathe ezomile, endaweni efudumele ukulima kwabo. Uma inkukhu kancane, amadivayisi endlini yabo, ungasebenzisa ubudala wokuxovela okuhlanekezelwe noma ibhokisi, amakhadibhodi ibhokisi kusuka zasendlini. Ngezansi ngithuka iphepha, amaphephandaba noma indwangu ezingadingekile, ne silulindele ushintsho njalo zokulala. Ngenhla esihlalweni izinkukhu iwashi isibani kufanele ovuthayo, kodwa ayikhanyi kakhulu, nokukhanya zinqotshwe. Isibani Kufanele obomvu noma ithunzi lelambu, wenza siqu sakhe kusuka ibhodlela plastic.
Ukondla amaphuphu ubudala usuku kuzodinga ukuthi ukukhuthala nesikhathi. ukudla Okokuqala siqukethe amaqanda cool abilisiwe (eyodwa 25-30 izicucu), okuyilona elidingekayo ukuze nquma noma ugaye. ukudla Landelayo ikhiqizwa amahora amabili, bese ne njalo efanayo. Ukondla izinkukhu okwenzekayo ebusuku ngezinsuku zokuqala zokuphila. Ukudla siqukethe unyaluthi iphalishi, abilisiwe ngobisi, ochotshoziwe utshani abasha. Nokho, uma izinhlobo zokudla ngeke alternate.
Kuyadingeka ikakhulukazi ukusho ngokuphuza. Ukondla amaphuphu ezinsukwini zokuqala zokuphila kulekelelwa ubisi. Ungathenga ukuphuza nezitsha ekhethekile izilwane ezincane, kodwa ungenza ngokwakho. Kungashona esosweni nembiza isigamu-litre. Thela imbiza ukumboza uhhafu Saucer ubisi, Pheqa. I esosweni seep ubisi kancane kusuka ikani, kuyoba ngobumnene iyangena esosweni. Kubalulekile kulezi zinsuku musa ezimanzisa inkukhu, kuyingozi enkulu ngabo. Ngeshwa, namuhla isimo ukuthi iphesenti eliphezulu kakhulu yokufa izinkukhu, Ngakho-ke belulekwa ukuba abanike ukuphuza ama-antibiotic, kokusisiza ukuba sibhekane nesimo nge ezihlukahlukene nezifo. Kuze zikhula, kuzoba noluncane kuye.
Ngosuku lwesithathu ekudleni sesilwane sakho, ungenza izinguquko, qala akunika ingxube ufulawa, pre-moisten ngayo ubisi, umhluzi noma amanzi. Kungcono Yiqiniso, ukusebenzisa umhluzi noma yogurt. Ukondla izinkukhu baye ukufaka amakhambi fresh ezinsukwini zokuqala zokuphila. Uma kungenzeka, ukuthola ngabo okuphakelayo a enezingane ezinezidingo ezikhethekile, iyoba kakhulu ukuphila kwakho kube lula. Thatha sivikele amachwane alo antekenteke kashizi, kuyasiza kakhulu kubo.
Lapho isilwane sakho izinsuku eziyisithupha, ungakwazi ukwengeza esebenza ngogesi umuntu izifunzo amaminerali kanye amatshe esihle futhi isihlabathi, uhambe emanzini. Ezinye vets ukuncoma ngosuku-20 ubudala ukungena amazambane ekondleni amaphuphu. Ezinsukwini zokuqala - ngesilinganiso 5 amagremu ngosuku, bese ukukhulisa inani. izinkukhu abadala kufanele kube elijwayele amazambane eluhlaza.
Lezi amathiphu alula kuzosiza abanikazi imfundamakhwela ukukhulisa izinkukhu omdala onempilo abanikeza wonke umndeni nge amaqanda.
Eye lehla "Udzha": Ukwakheka, afundiswe isicelo, ukubuyekezwa. izidakamizwa Ayurvedic
Isiqhingi Fabulous saseSumatra